हिमालपारि लिमीले जनप्रतिनिधि छानिसक्यो, यता उम्मेदवार हुन तँछाडमछाड
- जनक नेपाल | बिहीबार, चैत १०, २०७८
तस्वीर स्रोतः नाम्खा गाउँपालिका
हिमालवारिका गाउँबस्तीमा भर्खर चुनावी चहलपहल सुरु हुँदैछ । पार्टीका गाउँ नेताहरू उम्मेदवार हुन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । हुम्लाको हिमालपारिको लिमी उपत्यकावासीले भने चुनावअघि नै जनप्रतिनिधि छानिसकेका छन् ।
लिमी अर्थात् नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं. ६ । जहाँ गत मंसिरमै आउँदो पाँच वर्षका लागि वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन भइसकेका छन् । ‘हाम्रोमा पार्टी हुन्न । बिनापार्टीको नेता छान्ने हो,’ स्थानीय कुन्जक सोतेल तामाङले शिलापत्रसँग भने, ‘मंसिरको गाउँभेलाले खादा लगाइसक्यो ।’
जाङ, हल्जी र तिलगाउँ मिलेर बनेको वडा नं. ६ को वडा अध्यक्षमा पाल्जोर तामाङलाई दोहोर्‍याउने निर्णय गाउँभेलाले गरेको छ । वडा सदस्यहरूमा जाङकी पुटी तामाङ, हल्जिकी छिरिङ टुङडुप र तिलका टुङडुप लामा चयन भएका छन् । ‘पहिले गाउँ मुखिया छान्थ्यो । चुनावी वर्ष भएकाले वडाध्यक्ष नै छान्यौँ । गाउँभेलाको निर्णयविरुद्ध अब कोही उठ्दैन,’ कुन्जकले भने ।
बौद्ध धर्मावलम्बी लामा समुदाय मात्र रहेको लिमीमा दलित महिला पद भने खाली हुँदै आएको छ । लिमी मात्र होइन, नाम्खा गाउँपालिकाभर दलित समुदायको बसोबास छैन । त्यसैले नाम्खाका छवटै वडा समिति चार सदस्यमा सीमित रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ बताउँछन् ।
स्थानीय लामा समुदायले हरेक मंसिरमा गाउँभेला गर्छन् । गाउँभेलामा प्रत्येक घरबाट एक जना सहभागी हुन्छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाका अनुसार, वडा नं. ६ लिमीमा ५ सय ४१ मतदाता छन् । झण्डै ६० घरधुरी रहेको जाङमा २ सय ५, ९० घरधुरी रहेको हल्जीमा २ सय २६ र ३० हाराहारी घरधुरी रहेको तिलमा १ सय १० मतदाता छन् । तर, मंसिरमा झण्डै डेढ सय गाउँवासीको भेलाले वडाध्यक्ष र सदस्य चयन गरेको हो ।
लिमीको बस्ती र इन्सेटमा नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ
‘पहिलेपहिले गाउँभेलाले मुखिया छान्थ्यो । गाविसको चुनाव हुन थालेपछि वडाध्यक्ष नै मुखिया हुन थाले,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘गाउँको परम्पराले स्थानीय निकाय लामो समय खाली हुँदा पनि हिमाली गाउँहरूले नेतृत्वविहीन हुनु परेन ।’
गाउँभेलाले चयन गरेका जनप्रतिनिधिले आधिकारिकताका लागि आउँदो ३० वैशाखको स्थानीय चुनावका लागि मनोनयन दर्ता गर्नेछन् । एकभन्दा धेरै उम्मेदवारी नपरेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित हुने अध्यक्ष तामाङ बताउँछन् ।
‘अन्यत्रजस्तो लिमीमा उम्मेदवार बन्न तँछाडमछाड गर्ने चलन छैन । यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने पनि हुन्न,’ स्थानीय नर्बु लामाले भने, ‘जे फैसला हुन्छ, गाउँभेलाले सहमतिमा गर्छ । बरु गाउँका अगुवाले पालो लगाउँछन्, तर चुनाव लड्दैनन् ।’
पॉच हजार मिटरको नारा लेकपारिको सुन्दर उपत्यका हो, लिमी । हिउँदभर लिमी पूरै हिउँले ढाकेको हुन्छ । घरमा वृद्धवृद्धा, केटाकेटी र घरकुरुवा मात्र बस्छन् । उनीहरूका लागि चाहिने खाद्यान्न, दाउराको व्यवस्था घर छाड्नेले गरिदिन्छन् । चौँरी र झुपा काटेर सुकुटी बनाई छाड्छन् । एक हिसाबले ६ महिनालाई पुग्ने पूरै बन्दोबस्ती घरभित्रै गरिएको हुन्छ । लिमीमा मोबाइल फोन चल्न थालेपछि बाहिर गएकाहरूको सञ्चो–बिसञ्चोसम्म थाहा हुन्छ । तर, आफन्तको मृत्यु नै भए पनि पॉच हजार मिटर अग्लो लेक काटेर हिउँदभर गाउँ फर्किन सम्भव छैन । ‘कोही बिरामी परोस् कि मरोस्, थाहा पाएर पनि जान पाइन्न’, नर्बुले भने ।
लिमीका लेक र गाउँका गोठमा हजारौँ याक, भेडा र च्याङ्ग्रा छन् । ती याक, भेडा र च्याङ्ग्रा नै उनीहरूको आम्दानीका स्रोत हुन् । ताक्लाकोट लगेर बेच्ने र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्ने गर्छन् । सदरमुकाम सिमकोट आउनुभन्दा तिब्बत पुग्न भने सजिलो छ उनीहरूलाई । एक दिन पैदल हिँड्यो भने सीमामा गाडी भेटिन्छ । अर्को दिन तिब्बती बजार ।
मंसिरको अन्त्यतिर लिमी फुर्सदमा हुन्छ । हिउँ नपर्दै को गाउँ छाड्ने र को गाउँमै बस्ने भन्ने निधो गर्छन् । त्योभन्दा अघि जाङ, हल्जी र तिलको संयुक्त गाउँभेला बस्छ । गाउँको विकास, गुम्बाको रेखदेख, चाडपर्व, हिसाबकिताबबारे छलफल हुन्छ । पहिले गाउँपिच्छे मुखिया र तीन गाउँको अगुवाइ गर्न तिक्याप चयन हुन्थ्यो ।
‘पहिले मुखिया परिवार गाउँमै बस्थे र उनीहरूले शासन चलाउँथे । अचेल धेरै काठमाडौंतिर झरिसके,’ कुन्जक सुनाउँछन् । त्यसमाथि स्थानीय चुनाव हुन थालेपछि गाउँमा मुखियाको परम्परा हराउँदै गए पनि साना गाउँपिच्छे ‘गाउँ अध्यक्ष’ भने छानिँदै आएका छन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष चयन हुने व्यक्तिले तिनै गाउँअध्यक्षलाई साथ लिएर योजनाको निर्णय गर्नुपर्ने गाउँभेलाको निर्देशन छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १०, २०७८, १८:४२:००